Aš-intanethi ibilokhu ihlala yindawo encinci yingozi kwaye njengoko ixesha lihamba liya ngokuya ngakumbi. Abanye benu banokungabaza imfuneko yeNkonzo ye-Intanethi yangasese (VPN) kwinkonzo, kodwa ukusuka kumashishini alahlekelwa idatha yethu yabucala kubasebenzisi be-kibernetiniai nusikaltėliai kunye noorhulumente bahlola imisbenhi veelhu ye.
Ukuba usenokungabaza malunga nokufuneka, sifunde isikhokelo sethu se-newbie kwi-VPNs apha ngetoni yezizathu zokuba ufuna iVPN. „Kule nqaku“, „ndingathanda ukuzisa i-ExpressVPN“, „omnye wababoneleli abaphezulu kwihlabathi“.
„Ngamava kwii-94 kumazwe ngamazwe“, „i-ExpressVPN“ buvo įtraukta į „yeenethiwekhi ezininzi kakhulu zeVPN ezikhoyo namhlanje“. Amava kwishishini kunye nolwazi oluqinileyo olwakhiwe emva kwexesha alukhunjulwa.
1 „ExpressVPN Siboniso“
2 „I-ExpressVPN“ privalumai
2.1 I-1- „ExpressVPN“ internetinis puslapis
2.2 I-2-Ukubhala nge – karinio lygio – saugokite savo duomenis
2.3 I-3-Ukhuseleko olongezelelweyo luquka
2.4 4 – greitas ir stabilus
3 „ExpressVPN Con“
3.1 I-1- Intengo: Akunjalo rankos
4 „Isicelo seLizwe langempela“: „Igaba i-ExpressVPN“ paveikslėlis?
4.1 „Ukudlala nge-ExpressVPN“
4.2 „Ukusasaza kunye ne-P2P nge-ExpressVPN“
5 „Isiqinisekiso“: „Ngaba i-ExpressVPN ikhethekileyo“
5.1 Ukuphindaphinda –
5.2 ezinye iindlela
„Inkampani“ – „ExpressVPN Ltd“
„Eyilwe“ – 2009 m
Izwe – Iziqithi zaseBritų mergelė
„Iwebhusayithi“ – https://www.expressvpn.com
Ukusebenziseka kunye nokucaciswa
„Iinkonzo ezifumaneka kwi-Windows“, „Linux“, „iOS“, „Android“, „Mac“
„Iiplagizi zeSiphequluli“ – „i-Chrome“, „Firefox“, „Safari“
„Izixhobo“ – „iiRotters“, „i-Apple TV“, „i-Play Station“, „iXBox“, „i-Android TV“ „Ibhokisi“, „nokye nokunye“.
„Ukubhaliweyo“ – „OpenVPN“, „IPSec“, „IKEv2“
„Ukutshutshisa kunye ne-P2P“
„Indawo ze-160“ VPN
Iikhontrakthi ezinkulu zenyanga; enye į enexabiso eliphantsi – „I-NordVPN“ (3,49 USD / mėn.)
I-12,95 / mėn ye-1-inyanga yokubhalisa
I-8,32 / mėn ye-12-inyanga yokubhalisa
Isiqinisekiso semali ye-30 Yemini
„Nangona kukho ii-VPN ezinikezela ngamaxabiso angaphantsi kwe-ExpressVPN“, „ndiqinisekisa ukuba kunzima ukufumana enye nomgangatho wenkonzo“. „Ukusebenza kunye nekhono le-ExpressVPN lidlulile kunabanye abaninzi“.
I-1- „ExpressVPN“ internetinis puslapis
I-Britanijos Mergelių salos („i-BVI“) yra svarbios imtynės, susijusios su amfitetu, aukaulau, ukukhuselwa kwedatha (umthombo).
Enye yezinto zokuqala endifuna ukuzichaza ngolu nkampani kukuba isekelwe kwiiBritijos Mergelių salos (BVI). Nangona ubuchwepheshe bekala be-Jungtinė Karalystė, umthetho wendawo apha uzimeleyo.
Okubaluleke kakhulu, akukho mthethweni osemthethweni malunga nokukhuselwa kwedatha kwi-BVI. „Iinkampani ze-VPN“ šioje svetainėje yra „izigqibo sokusekela“ iziphumo afa azikho phantsi kwemithetho yokugcina idatha, kunye ne-ExpressVPN icacisa ngokucacileyo ukuba abafaki imisebenzi yomsebenzisi, ngoko kufanelekile.
„Ukongeza elinye izinga lokungaziwa“, „xa unquma ukuhlawula ukubhalisa kunye nabo“, „ngaphandle kweendlela eziqhelekileyo ezifana namakhadi-mboleko“ („iVisa“, „Master“, „i-American Express“, „i-JCB, njl“) „Klarna“, „YandexMoney“, „njl.“), „I-ExpressVPN“ – tai jūsų „iyavuma ezinye iifayile ze-cryptocurrency ezifana ne-BitCoin“.
I-2-Ukubhala nge – karinio lygio – saugokite savo duomenis
Ukunxibelelana kweVPN kubandakanywa kakhulu kwiingxenye ezibalulekileyo; inkqubo yokuxhuma kunye neprotocol yokubhaliweyo. Umgaqo-nkqubo wokuxhamla usungula indlela idatha echithwa ngayo, ngelixa iprotocol yokubhaliweyo isahlulo esichaza idatha yakho ukuqinisekisa ukuba ayikwazi ukufundwa ukuba kukho umntu oza kubeka izandla.
„I-ExpressVPN“ sukurta eliphezulu lezorhwebo elifumanekayo lokubhaliweyo elikhoyo namhlanje, „i-AES-256“. Lo mgangatho ucinga ukuba awunakuqhekeka kweli nqanaba kwaye kusetshenziswe oorhulumente abaninzi kunye namajoni ehlabathini lonke.
Nangona ixhasa iinkqubo ezininzi zokuxhamla ezifana ne-IPSec kunye ne-PPTP, ndincoma kakhulu ukuba ushiye izicwangciso ezizenzekelayo kumxhasi ukuba ukhethe ngokuzenzekelayo enye yakho kuqala, ngaphambi koku.
Kaip užfiksuoti „indlela“ pavyzdžius, kuriuos naudojant „ExpressVPN“ buvo užšifruotas
I-3-Ukhuseleko olongezelelweyo luquka
Bulala – „I-ExpressVPN“ nėra vienintelio pavyzdžio, kaip jūs galite sužinoti apie „baksabisa ngokwenene ukhuseleko lwabo“. Umtshini wokubulala uyinkqubo yokukhusela isofthiwe ekhuselweyo eyenza ifowuni yakho ixhumeke kwi-intanethi yekhompyutha xa kukho naziphi na izizathu ukuxhunywa kweVPN kulahgakiise okanye kun..
„Ulawulo lweDNS“ – Abanye bakho bangasetyenziselwa ukuthobela olunye ulawulo lwe-DNS, kodas n-ExpressVPN awuyi kuba nexhala malunga naloo notto. „I-ExpresVPN“ nėra šifruotas, bet ne DNS duomenų bazėje, bet ne šifruotas, o ne paimtas, bet ne užšifruotas, o ne pašalintas..
„Xhuma kwi Startup“ – Uninzi lwezixhobo zethu zidibanisa ngokuzenzekelayo kwi-intanethi xa zivuliwe. Ngokuvumela umxhasi we-ExpressVPN ukuba aqale xa i-device yakho ithetha ukuba ukhuseleko lwakho luya kuqala xa kuvuliwe kwakhona.
4 – greitas ir stabilus
Ngenethwekhi eninzi, abaninzi abantu babecinga ukuba isevisi yeVPN iya kukhawuleza kwaye izinzile kodwa makhe ndiqinisekise ukuba oku akusoloko kunjalo. „Ngombulelo“, „i-ExpressVPN ayifanelekanga kwiprofayili yokukhawuleza kwaye isigxina kwaye kwezinye iimeko, ndiyamangaliswa.
Ngaphambi kokuba ndixubushe ngesantya kunye nawe, ndingathanda ukucacisa izinto ezithile malunga nesivinini kwi-VPN. Ndiqaphele ezinye iingcamango eziphosakeleyo apho abasebenzisi bazama khona basebenzise i-VPN kwaye batyhawule umboneleli wesevisi xa izantya zingafiki ukuya kulindeleke.
Isivinini seVPN luxhomekeke kwiimeko ezininzi, kubandakanywa (kodwa kungaphelelanga); Isantya sakho somnxeba we-intanethi, ubuchule befowuni oyisebenzisayo, yiziphi iiprotoption Protocols ozikhethayo, umgama ukusuka kwiseva ekhethiweyo yeVPN kunye nento oyenzayo kumncedisi weVPN.
Ngenjongo Yemvavanyo Engagement Ngaphambili, Ndagijima Iimvavanyo Ezivela endaweni Yam ekhona eMalaysia Kumca Ngesantya esicatshulwayo se 230 Mbps phantsi kunye ne-150 Mbps phezulu.
VPN JAV serverio serveris
„Isiphumo sokuvanya isivinini se-ExpressVPN kwi-server yase-US“ („ubona umphumo wangempela apha“). „Ping“ = 190 ms, atsisiuntimas = 83,40 Mbps, „Laisha“ = 17,74 Mbps.
„I-VPN Jurophu yaseJurophu“ („eJamani“)
Isiphumo sokuvanya isivinini se-ExpressVPN kwi-server yaseYurophu (ubona umphumo wangempela apha). „Ping“ = 228 ms, atsisiųsti = 68,67 Mbps, „Laisha“ = 7,75 Mbps.
Nangona ukhetho lwam oluqhelekileyo lképvanya iYurophu ngokuqhelekileyo lubune eLondon okanye eAmsterdam, namhlanje ndigqibe ekubeni ndakhetha iJamani kuba i-Autobahn yayingqondweni yam ngesizathu esithile. Kwimeko nayiphi na į, ndaphinda ndandimangaliswa ngokukhawuleza ndikwazi ukufumana afa.
„VPN Africa Server“
Isiphumo sonicvanya iViewVPN kwisiphumo se-Afrika (ubona umphumo wangempela apha). „Ping“ = 261ms, atsisiųskite = 74,69 Mbps, „Laisha“ = 10,98 Mbps.
„I-Afrika ihlala yeyona ndawo inzima iinkonzo VPN njengoko bengekabikho ndlela“. Ndizamile ezinye iinkonzo ze-VPN ezazinonxibelelwano e-Afrika kodwa zihlala zingalawuleki okanye zicotha kangangokuba andikwazi kwenza intoko.
„I-VPN Asia Server“ („iSingapore“)
„Isiphumo sokuvanya isivinini se-ExpressVPN kwi-Asia“ serveris („ubona umphumo wangempela apha“). „Ping“ = 11 ms, atsisiuntimas = 95,05 Mbps, „layisha“ = 114,20 Mbps.
Njengomnye wamazwe aphucuke kakhulu e-Asia, iSingapore suteikia jums idideke kwaye inganikezeli ngokukhawuleza nje kuphela kodwa i-ping rate. Ubungakanani bemilinganiselo jūs-ping mhlawumbi ngenxa yokusondela kwam indawo kwindawo engagekumbi.
I-VPN Australijos serverio serveris
Isiphumo sokuvanya isivinini se-ExpressVPN kwi-server yase-Australia (ubona umphumo wangempela apha). „Ping“ = 105 ms, atsisiuntimas = 89,55 Mbps, „Laisha“ = 38,76 Mbps.
„Umhlaba ophantsi phantsi wawukhawuleza kunye“, „ngokukhawuleza ukuphuma kwi-90 Mbps“. Amanani e-Ping ayemalunga nokulindeleke ngokubhekisele kwezinye iindawo endazivavanyayo.
I-1- Intengo: Akunjalo rankos
Ixesha elincinci lokubhaliselwa kwi-ExpressVPN liqala ukusuka kwinyanga enye, kodwa andicinga ukuba umntu uya kuthengisa esi sicwangciso kuba iyona ebiza kakhulu. „Phantse bonke ababoneleli be-VPN bakhuthaza abasebenzisi ukuthenga kwixesha elide kumaxabiso aphantsi“.
Isicwangciso senyanga esisodwa sibiza i- 12,95 USD, kodwa loo xabiso iyancipha xa ubhalisela i-6 okanye i-12 inyanga. Enyanisweni, tyikitye kwiinyanga ze-12 uze ufumane iinyanga ezintathu ngaphandle kwe-free – iš esmės sustabdyti mokestį. Nangona kungengona nqanaba elincinci, ngokuqinisekileyo likhuphiswano.
„Thelekisa amaxabiso e-ExpressVPN kunye nezinye ii-VPN“
„ExpressVPN“ 12,95 USD 8,32 USD / mėn 8,32 USD / mp
GreičiausiasVPN 10,00 USD 2,49 USD / mėn 2,49 USD / mėn
„NordVPN“ 11,95 USD 6,99 USD / mėn 3,99 USD / mėn
PureVPN 10,95 USD 5,81 USD / mėn 3,33 USD / mėn
IP Vanish 5,00 USD 3,25 USD / mėn 3,25 USD / mėn
„Isicelo seLizwe langempela“: „Igaba i-ExpressVPN“ paveikslėlis?
Ukuba ungumdlali wegeria kwaye ucinga ukusebenzisa i-ExpressVPn ukudlala kwiindawo ezahlukeneyo zeseva, andiyikucebisa oku. Kukho ukugoba okubi kwi-VPN ukuxhumeka okunokuthi uphonsa umdlalo wakho ngaphandle kokuba udibanisa kumncedisi weVPN kufuphi nendawo yakho. Oku kuya kuba yinto engenakunceda nantoni na, ngoko-ke qaphela.
* Amanqaku kwiimvavanyo
„Zonke ezi mvavanyo zaqhutywa kwiiprotokholi ezizenzekelayo kunye nezicwangciso kwi-ExpressVPN Windows“ klientas. „Ndayama ukuqhuba i-ExpressVPN kum“ maršrutizatorius „Yam“, „kodwa ekubeni ndine“ biudžeto maršrutizatorius „ekhaya“, „ukukhawuleza kwakumangalisa“. Andicebisi ukuba isebenze isevisi yeVPN kwi-router yasekhaya ngaphandle kokuba unomfanekiso ophezulu we-line njengeNetgear Nighthawk X10 ebiza kakhulu.
„Ifowuni yam yokuvavanya yayiyikhomputha entsha eqhuba i-Intel 8th Gen“ lustas. Ndikrokrela ukuba le nto yayingu-butelio kakliukas kwamanye amaxesha kwaye unako ukufumana isantya esiphezulu xa uqhuba isevisi yeVPN kwi-PC entsha yedeskithophu enegunya lokucwangcisa ngaphezulu.
„Ukusasaza kunye ne-P2P nge-ExpressVPN“
„Ngokukhawuleza kuwo onke amaseva endivavanyayo ukuba ndiphakame kakhulu“, „akufuneki kubekho uphuculo lwezobuchwephesha kwiinkomfa ze-4K ngaphezu koxhumano lwe-ExpressVPN“. Ndiyaqonda ezinye iinkonzo zokusasaza zi-geolocation-ezithintele kwaye awe, i-ExpressVPN inceda kunye naloo notto.
„Ukusasaza kwi-BBC iPlayer“, „ExpressVPN“.
„Ukuxhuma kwi-UK“, „ndavavanya i-iPlayer ye-BBC“.
Konke okufuneka ukwenze kunamathele kwindawo yoxhumo lwendawo kwaye usebenzise inkqubo yakho ye-P2P kwaye iya kusebenza. Ilizwi leengcebiso – kuthatha ixesha lokuba amachweba adibanise ngokuchanekileyo kwaye iifudlana zakho ziqale ukukhuphela. Musė ukwethuka kwaye umane unike ixesha elithile – liya kusebenza!
„Ukuhamba kwakuhamba kakuhle kwaye inene“, „udicuba ukuba i-P2P ithintelo yakwazi ukufumana isantya esiphezulu kunesiqhelo soxhumano“. Ngamaqhinga, kodwa enyanisweni.
„Isiqinisekiso“: „Ngaba i-ExpressVPN ikhethekileyo“
Ndivakalelwa kukuba kuncinane kakhulu ukukhononda malunga nenkonzo. Inombolo eninzi yamaseva kwindawo efanelekileyo yokusabalalisa, ukukhawuleza kokuxhumeka kokuxhamla kunye nodumo oluhle kwintsimi. „Kugqwesa ngokuchanekileyo oko kwadalwa kuyo“ – „Ubumfihlo kunye noKhuseleko“.
Iimvumelwano ezinyangeni zenyanga
„Indierla ezizezinye ezidumileyo kwi-ExpressVPN“: „Surfshark“, „NordVPN“.
„Ukubona ezinye iinketho kwiinkonzo ze-VPN“, „khangela yethu ulhuwe lweenkonzo ze-VNN ezilungileyo ze-10“.
Ukuxelwa kokufumana ulwazi – Sisebenzisa amakhonkco adibeneyo kweli nqaku. I-WHSR ifumana imali yokudluliselwa kwiinkampani ezichazwe kweli nqaku. Izimvo zethu zisekwe kumava okwenyani kunye nedatha yovavanyo yokwenene